Izibalo Ze-YouTube (2020) - Amaqiniso Amangalisayo Okufanele Ukwazi - Komphakathi
Ubuwazi ukuthi ividiyo yokuqala ye-YouTube yalayishwa ngomhlaka 23 Ephreli 2005? Kusukela lapho, i-YouTube ihambe ibanga elide ukuthi ibe yiwebhusayithi yesibili evakashelwa kakhulu emhlabeni. Kangangokuthi abantu abacishe babe ngama-60% bakhetha amapulatifomu okusakazwa kwamavidiyo aku-inthanethi afana ne-YouTube nge-cable TV noma izinhlelo zokukhokha ezithandwa kakhulu.
Ngabe ufuna amanye amaqiniso nezibalo ezifanayo zokuzijabulisa? Ngemuva kwalokho ake sibheke amanye amaqiniso athokozisayo azolungela ulwazi nolwazi lwakho jikelele.
Izibalo Ze-YouTube - Amanye Amaqiniso Ajabulisayo
I-YouTube yadalwa ngo-2005 ngabasebenzi abathathu bakudala be-Paypal. Njengesiza sesibili esivakashelwa kakhulu, cishe abasebenzisi abangama-80% bane-akhawunti ye-YouTube. Abantu abangaphezu kwama-40% nabacishe babe ngu-45% abasebenzisa i-intanethi basebenzisa i-YouTube. Ngamanye amagama, i-Youtube iheha ingxenye ebalulekile yethrafikhi ye-inthanethi.
Abantu babonakala bezithanda izincomo ze-YouTube. Inezinga lokuphumelela eliphakeme kakhulu lezincomo, njengoba abantu abangama-70% bebuka noma bethola amavidiyo amasha we-Youtube ngokuncoma kwawo. Kubalulekile ukuthi ube nevidiyo ehehayo kumasekhondi okuqala ayi-10. Uma ungabahehi phakathi nemizuzwana eyishumi yokuqala, abasebenzisi bazoyishiya ividiyo.
Hhayi lokho nje, kepha i-YouTube idlule izinjini zokusesha eziningana. Manje ephethwe i-Google, i-YouTube iyinjini yokusesha yesibili edume kakhulu ku-inthanethi. Ungahle wazi ukuthi iDespacito yiyona ebukwa kakhulu, kanti iBaby bekuyividiyo engathandwa kakhulu ku-YouTube.
I-YouTube ithola ukusakazwa kwabasebenzisi ababalelwa ezigidigidini ezi-2 ngenyanga. Okungenani abantu abayizigidi ezingama-30 bangena ku-YouTube njalo. Kodwa-ke, kunababhalisile abangu-1 million kuphela be-Youtube TV. I-YouTube yeselula ikhula kancane kancane ibe yinto ebalulekile yokukhula kwe-YouTube. Imali engenayo yeselula ye-YouTube inyuka ngokungaguquguquki. Ngokuhambisanayo, isikhathi esimaphakathi se-YouTube seselula sihlala cishe imizuzu engama-40.
Cishe ukubukwa okuyizigidi eziyinkulungwane kutholakala kuselula yakwa-YouTube ngosuku. Amavidiyo angaphezu kwesigidi esisodwa asakazwa ku-Youtube nsuku zonke ngabasebenzisi. I-YouTube yipulatifomu ekhula kakhulu kangangokuba kulayishwa amavidiyo angaphezu kwamahora angama-500 umzuzu ngamunye ku-YouTube.
Izici zezezimali ze-YouTube:
I-Google ithole i-Youtube ngama- $ 1.65 billion ngoNovemba 2006. Kusukela lapho, i-Youtube ibhekele cishe u-6% wemali engenayo yokuthengiswa kwezikhangiso ze-Google. I-Youtube ibingaphansi komlilo ongaguquguquki ngekhwalithi yayo yokuhlinzekwa kwesikhangiso.Ngaphandle kwalokho, ukuqoqwa kwemali engenayo kweGoogle nge-YouTube kungama- $ 4 billion. I-Google ayidalulanga okuningi ngokusebenza kwe-YouTube, ngaphandle kokuthi kubukeka sengathi iyinkundla yevidiyo ebusayo.
Ngokufanayo, i-Google ngokuyinhloko ithole i-YouTube ukwandisa amakhono ayo okusesha, kepha yaba uhlangothi lokushicilelwa kwamavidiyo olungenalutho. Akukho okutheni okuphathelene nokusebenza. Noma kunjalo, imali engenayo ephelele eyenziwe yi-Youtube ingama- $ 15.1 billion ku-2019.
Ngenxa yezinkinga eziku-inthanethi zamalungelo abanikazi, i-YouTube bekufanele ikhokhe cishe u- $ .125 billion kuze kube manje. Izindleko eziphelele zokusebenza kwe-youtube cishe ziyi- $ 6.35 billion kuze kube manje, minyaka yonke.
Kunomehluko omkhulu phakathi kwenzuzo ye-YouTubers ene-5K nalabo abanababhalisile abangaphezu kuka-500K. Cishe umehluko ophindwe kayishumi. Ngamanye amagama, iziteshi ze-YouTube ezinabalandeli abayi-500 kuya ku-5,000 bahola cishe u- $ 315 ngevidiyo ngayinye. Okwamanje, noma ngubani one-500K + wenza okungenani u- $ 3.8K ngokulayisha kwevidiyo ngakunye.
Asikwazi ukungakunaki ukuthi izikhangiso ziya ngokuya zicasula emsamo. Ngaphandle kwalokho, abantu abangaphezu kuka-78% bakholelwa ukuthi i-YouTube iyinkundla yezikhangiso esebenzayo. Babalelwa ku-62% abanikazi bamabhizinisi abasebenzisa i-YouTube ukushicilela okuqukethwe kwamavidiyo.Ukumaketha okuhlangene kuye kwanda kancane ku-YouTube kusuka ngo-2017 kuqhubeke. Cishe u-80% wabathengi bemikhiqizo bathi bakuthungathile okuqukethwe ku-YouTube.
Cishe kuphela i-16% yethrafikhi ye-YouTube evela e-US. Noma kunjalo, ama-70-80% abantu abadala (abesilisa nabesifazane) basebenzisa i-Youtube. Akugcini lapho, i-YouTube idumile kubasebenzisi asebekhulile. Ngaphezu kwengxenye yeminyaka engama-75 +, abantu abadala base-US basebenzisa i-Youtube. Abasebenzisi abangaphezu kwama-89% bavela ngaphandle kwase-US.
Ake sikhulume ngamazwe. Namuhla, i-YouTube ikwazile ukunweba emazweni angaphezu kwekhulu ngezilungiselelo zezilimi ezingama-80. Inabakhiqizi abayizigidi ezingama-50 emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, i-India ingenye yezindawo ezinde kakhulu, ezinabasebenzisi abasebenzayo abayizigidi ezingama-265.
Ngaphandle kokuthi isiNgisi siwulimi oluthandwayo, cishe kuphela ama-35% wokuqukethwe ku-Youtube yisiNgisi. I-YouTube futhi uhlelo lokusebenza lwesibili oludume kakhulu noluthandwayo lokusakazwa kwevidiyo ngemuva kweNetflix ngokuqukethwe okunothile nokuzibandakanya. Ngamanye amagama, yiinomboloeyodwaipulatifomu tabasebenzisi besigqoko bakhetha lapho izikhangiso zijwayelekile.
Yini enquma ividiyo enhle ye-Youtube?
I-YouTube yindawo lapho noma ngubani angaba umuzwa wobusuku bonke. Ukuduma akubalulekile ku-YouTube uma unganikeli ngokuqukethwe okuhlobene. Ngokuya nge-YouTube, okungenani okungenani kathathu kubaluleke kakhulu ukuthi ividiyo ibhekane nabasebenzisi. Kubaluleke kakhulu ku-1.6x ukuba namavidiyo ahlobene nezintshisekelo zababukeli.
Ngo-2019, i-YouTube yenze ama-tweaks amaningi nezinguquko kwikhwalithi yokuqukethwe kwayo, ukuphepha komkhiqizo, nokunye okuningi. Kusukela lapho, abantu banamathuba amancane okuthola ulwazi okungelona iqiniso ngama-70%. Lokhu kufaka phakathi amavidiyo afana nezithibelo zokuchofoza nokunye okuqukethwe okungacwaningiswanga kahle okunikeza ulwazi olungamanga nolungamanga.
Ngamanye amagama, imithethonqubo emisha yakwa-YouTube iyaqinisekisa ukuthi abafundi bathola kuphela ulwazi oluyiqiniso noluyiqiniso olutholakalayo.
Yize lesi kuyisihloko esibucayi, i-Youtube ine-53% yababukeli abathanda okuqukethwe okulinganisela ubulili. Inani elilinganayo noma elengeziwe labalingiswa besifazane liya ngokuthandwa ngababukeli. Ngokufanayo, i-39% yesikhathi sesikrini inikezelwe kwabesifazane. Abesilisa kusamele bakhulume kabili ngaphezulu futhi bakhiqize imiphumela engama-56% ngenkathi abesifazane bedla cishe i-53% yesikhathi sesikrini.
I-YouTube yipulatifomu evamile yamavidiyo engakalingani namanje. Ngemuva kokuphumelela kwayo yonke eminye imikhakha, iGoogle ibeka phambili i-YouTube njengento enkulu elandelayo yokwandisa inani layo. Kusebenza ekunikezeni imikhiqizo emisha nezici ezisetshenziswa ne-Youtube.
Lawa ngamanye amaqiniso acwaningwe kahle esingakulethela wona. Esikhundleni samaqiniso nezibalo ezivamile, sikulethela lokhu ngesiqinisekiso esiphelele esisuka emithonjeni eyiqiniso.